Recipe Buuxinta Cuntada Homeade + Video - Show Sugk Geek Show - Buuxinta
Fudud, buuxinta miro guduudka ah ee guriga lagu sameeyo oo isku yimaada 10 daqiiqo oo keliya. Isticmaal fersken cusub, barafoobay, ama qasacadaysan oo u kari waqti ka hor si aad uga fogaato qoyaanka jilicsan iyo buuxinta aan la karin. U isticmaal cagaha , xirmooyinka gacanta , ama dusheeda moofo ! Uma baahnid inaad iibsato kuwa fiiq-macaan ee aadka u macaan weligood.
baz luhrmann romeo iyo juliet soundtrack
BULSHADA BUUXINTA INGIRIISKA
Waxaad isticmaali kartaa nooc kasta oo fersken aad rabto, mid cusub, barafoobay, ama xitaa qasacadaysan (kaliya nadiifi dareeraha oo u isticmaal cabirka biyaha). Waxaan isticmaalayaa ClearGel sida wakiilka sii dhumuc weyn maxaa yeelay way iska cadahay, wuu dhalaalayaa, sifiican ayuu u fariisanayaa. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa budada galleyda!
TALLAABO BUUXIN TALLAABO
Tallaabada 1 - Fiiq, udub dhexaad, iyo jarjar fiiq yaryar, 1/2 es xabbadood ama xaleef khafiif ah iyadoo kuxiran waxa aad u isticmaaleyso buuxinta. Waxaan jeclahay qaybo yaryar sida waxyaabaha gacmaha lagu jiito iyo qaybo waaweyn oo loogu talagalay miro guduud ah ama loo isticmaalo dusha sare. Hubso inaad maqaarka ka saarto haddii kale waxay dhadhamin doonaan calalinta oo ma yeelan doonaan dusha sare. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa fersken la qaboojiyey taas oo ka dhigaysa tan xitaa fudud!
Tallaabada 2 - Kalluunka ku rid digsi weyn kuleylka dhexdhexaadka ah. Ku dar subag oo walaaq ilaa inta subagga la dhalaalayo. Qiyaastii 1 daqiiqo.
Tallaabada 3 - Ku dar biyo (ama casiirka miro guduudka), qorfaha, sonkorta buniga ah, iyo milixda. Kadib walaaq iskudar.
Tallaabada 4 - Whisk (qabow) biyo (ama casiir) iyo GlearGel (ama budada galleyda) si wadajir ah koob gooni ah si aad u sameysid dharbaaxo, ka dibna ku dar fersken adiga oo si tartiib ah u walaaqaya kuleyl dhexdhexaad ah.
Pro-tip - ClearGel uma xoog badna sida budada galleyda. 1 ounce kasta (28 g) oo ah ClearGel, isticmaal 1/2 wiqiyadood oo galley ah.
Tallaabada 5 - Karso dhexdhexaad dhexdhexaad ah kuna walaaq 2 ilaa 3 daqiiqadood ilaa isku darku bilaabmayo inuu xumbo oo sii adkaado.
Tallaabada 6 - Yaree kuleylka dhexdhexaad, ku dar liin dhanaanta. Karso 1 daqiiqo oo dheeri ah si aad u hubiso in ClearGel / galleyda gebi ahaanba la kariyey.
bixinta farta dhexe micnaheedu waa
Talo-siin - Galeyda ma jecla aashitada, sidaas darteed waxaa ugu wanaagsan in lagu daro liinta ka dib marka ay galleydaadu xoogaa kariso.
Tallaabada 7 - Isku dar ka qaad dabka. Hadda waxaad ku shubi kartaa buuxinta kulul dhalooyinka waxaadna ku shubi kartaa miro guduudkaaga! Fiiri boostada blogkan qasacadaynta buuxinta miro guduud si aad u hesho faahfaahin faahfaahsan. Had iyo jeer waan iska daayaa buuxinta qaboojiyaha oo waxaan ku ridayaa bac qaboojiyaha si aan hadhow u isticmaalo. Buuxinta miro guduhu waxay ku fiican tahay qaboojiyaha illaa toddobaad ama 6 bilood qaboojiyaha.
WAA MAXAY FARXADOON UGU FIICAN BUUXINTA?
Ma ogtahay inay jiraan in ka badan 300 nooc oo fersken? Waxay u kala baxeen 3 qaybood: freestone, clingstone, iyo semi-freestone. Dhammaan waxaa lagu go'aamiyaa sida jidhku ugu dhego miro guduud. Fersken Freestone ayaa ugu fiican dubista maxaa yeelay badanaa wey ka weyn yihiin kana casiir yar yihiin ferskenka xajinta. Haddii ay tahay inaad daadiso tan miro ah, waad ku mahadsan tahay in godadka ay si fudud u soo baxaan.
Runtii waxaan doorbidaa inaan isticmaalo fersken barafoobay. Maqaarka waa lagaa qaadaa, godadka waa lagaa qaadaa, horeyba waa loo jarjaray waxaana lagu qaatay meesha ugu sarreysa ee cusbooneysiinta! Markaa inaad ku soo booqato suuqa beeraleyda mooyee oo aad dhali karto duud weyn oo ah basbaas cusub, casiir leh, barafoobay ayaa ah tan ugu kalsoonida badan.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa fersken qasacadaysan! Haddii aad marto wadadan, uma baahnid inaad wax aad u karisid maxaa yeelay mar hore ayaa la kariyey. Xulo farmaajo casiir ah halkii aad ka sharoobi lahayd si aad uga fogaato buuxinta inay aad u macaanto.
SIDEE KU SAMEEYSAA DUFAN NABAD AH OO AAN LAGU CAYAarin?
ClearGel ama Cornstarch - Haddii aadan sameyn buuxin badan markaa malaha weligaa ma maqal ClearGel . Asal ahaan waa nooc ka mid ah hadhuudhka galleyda laakiin runti waa mid muuqata oo aad u dhalaalaya sidaa darteed buuxintaadu waxay umuuqan doontaa sida u buuxsameyso cherry qasacadaysan.
Cornstarch aad buu u shaqeeyaa sidoo kale midabku waa wax yar oo cuudiyayaal ah buuxintiisuna ma sii ahaato mid jilicsan. Haddii aad qorsheyneyso inaad sameyso miro badan oo buuxa, waa inaad dalbataa xoogaa ClearGel oo aad siisaa isku day! Waxaan kaliya jeclahay sida quruxda badan iyo dhalaalka u eg buuxinta jeeriga. * la soco farqiga u dhexeeya cabbiraada cuntada ClearGel iyo galleyda.
Recipes badan oo Macaan Si Aad Isku daydo
Sida loo sameeyo buuxinta miro guduudka guriga lagu sameeyo adiga oo isticmaalaya fersken cusub, barafoobay, ama qasacadaysan! Buuxinta miro guduudkani waxay ku fiican tahay roodhida, buskudka gacanta, buuxinta keegga, ama miro diiran! Waxay qaadataa in ka yar 10 daqiiqo in la sameeyo. Waqtiga karinta:30 daqiiqado Waqtiga qaboojinta:25 daqiiqado Wadarta Waqtiga:55 daqiiqado Kalori:264kcal
▢32 ounces (907 g) fersken cusub ama barafaysan, diiray oo la jarjaray
▢8 ounces (227 g) biyo ama casiirka miro guduudka
▢6 ounces (170 g) sonkor cad
▢laba ounces (56 g) sonkorta buniga ah
▢1/8 qaaddo shaaha qorfe
▢laba ounces (56 g) ClearJel ama 1.5 wiqiyadood oo galley ah
▢laba ounces (56 g) biyo qabow
▢laba Miisaska cuntada lagu kariyo liin dhanaan
▢1 qaaddo shaaha soosaaray vanilj cad
Ku dar fiiqdaada, biyaha, sonkorta, qorfaha, milix, iyo sonkorta buniga ah digsi weyn oo kuleylka dhexdhexaadka ah.
Kari isku dar ah ilaa ferskenku u jilicsan yahay sida aad iyaga jeceshahay. Fishash cusub ayaa qaadan doona kan ugu dheer ee wax lagu karsado.
Isku dar ClearGel-kaaga (ama budada galleyda ah) biyo qabow isla markaana sifeeq wada yeel si aad u sameysid slurry
Ku shub slurry gaaga isku darka miro guduudka kulul kuna kari ilaa buuxinta miro guduudku ay fiicnaato oo dhumuc weynaato oo ay u caddaato. 3-5 daqiiqo. Karso hal daqiiqo oo dheeri ah si aad u hubiso in ClearGel uu si fiican u kariyay.
Isku dar iskudarka dabka oo ku dar liin dhanaantaada iyo soosaarida vanilj. Walaaq isku dar.
U oggolow isku-darkaaga inuu qaboobo ka hor intaadan isticmaalin!
Waxaad isticmaali kartaa fersken cusub, barafoobay, ama qasacadaysan. Kaliya iska hubi in haraga laga saaray. ClearGel uma xoog badna sida budada galleyda. Mid kasta oo ounce ah oo ah 'ClearGel', isticmaal .75 wiqiyadood oo ah budada galleyda. ClearGel wuu dhalaal badan yahay oo si fiican ayuu u xajiyaa kuleylka badan iyo qabowga isagoon kala jabin.
U adeegida:1koob|Kalori:264kcal(13%)|Kaarboohaydraytyada:68g(2. 3%)|Protein:1g(laba%)|Dufan:1g(laba%)|Dufan Dufan:1g(5%)|Sodium:153mg(6%)|Kaliumperyamper:2. 3. 4mg(7%)|Fiber:labag(8%)|Sonkor:66g(73%)|Vitamin A:370IU(7%)|Vitamin C:10mg(12%)|Kaalshiyam:19mg(laba%)|Bir:1mg(6%)
cuntooyinka keega vanilj faransiiska ee xoqan
fursad rapper on duurjoogta n baxay
intee in le'eg bay tahay meydka 3
kabaha lebron james 2016 taariikhaha sii daynta